9 Dhambaal Oo Aad Dib Ugu Soo Ceshan Karto Jaceylkaaga Kaa Xanaaqay | Arrimaha Bulshada
Home Bulshada 9 Dhambaal Oo Aad Dib Ugu Soo Ceshan Karto Jaceylkaaga Kaa Xanaaqay
Bulsha:- Ma dooneysaa inaad raali geliso jaceylkaaga,gabadh ama wiil,waxii uu doono ha ahaadee.Waa la gama maarmaan in qofka uu dib u soo ceshan karo lamaanahiisa marka la’isku dhaco ama si kooban la’issu khilaafo.
Ogow,farriimaha Sorry-da ah waxay jilcisaa qalbiga bani’aadamka, gaar ahaan qofka uu kaala dhaxeeyo xiriir sokeeye.
Waa dhaqan wanaagsan in lamaanaha ay muujiyaan dabacsanaan iyo issu-tanaasullaad,waayo raali-gellintu waa waddada keliya ah ee lagu ilaalin karo caafimaad qabka xiriirka lamaanaha.Alcarabiya.com ayaa ku soo xushay 8 qodob oo lagu dhalaalin karo qalbiga qofka ku jecel.
1-Waad ogtahay inaad aad u qurrux badan tahay,waadna dareensan tahay inaad tahay qof caqli badan,laakiin ma oggid inaan kaa xumahay aniga.
2. Ila joog oo ha iga teggin weligay macaan badan.Waan ka xumahay waxii dhacay.
3-Waan oggahay in ereyga Sorry uusan ku caawin doonin.Balse waan ku raali-gelinayaa ee iga aqbal codsigeyga.
4-Xaaladda aan ku soo celiyo sidii hore oo wanaagga aheyd!Waan murugoonayaa,waana qoomameynayaa.
5-Waxaad u macdahay sida Malabka.Waxaadna u iftiin badan tahay sida Dayaxa oo kale.Haddii aad aqbasho raali-gellinteyda,waxaad noqoneysaa qofkeyga kowaad oo marnaba kaama dheeraan doono.
6-Raali-gellinteydu waxay dhayeysaa boogta ku damqeysa.Waan kuu xiisay Qalbi, waana ku jeclahay.
7-Waan qiranayaa khaladkeyga,waana ka qoomameynayaa waxii dhacay.
8-Farxaddaadu waxay nuurineysaa qalbigeyga waxayna dejineysaa niyaddeydan ku raacday.Dib iigu soo laabo Xayaati.Fadlan i cafi.
9-Waan ka xumahay haddii aan ku dhaawacay.Kula ma doonayo wax xumaan ah.Waxaad tahay jaceylka nafteyda.Dib iigu soo laabo Ruuxii!!